Challenger Brand ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲ ??? | YEC
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်က စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ Puerto Rico ကနေ BVI (British Virgin Island) သွားဖို့ လေယာဉ်စောင့်နေရာမှ လူမပြည့်လို့ flight canceled လုပ်ခံရတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီလူငယ်စီးပွားရေးသမားဟာ ဘုတ်တစ်ခုပေါ်မှာ BVI သို့သွားမည်၊ တစ်ယောက် $39 ဆိုတာရေးပြီးနောက်မှာ Virgin Airline ဆိုတာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ Richard Branson ပါ။
ဒီလိုပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ Market Leader တွေဟာ တစ်ခါတရံမှာ အတိတ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမှာ ပျော်မွေ့နေတတ်ကြတယ်။ ဒီတော့ ဒီ Market Leader တွေကို Challenge လုပ်မည့် Challenger Brand တွေလိုလာတယ်။ Virgin Airline ဆိုတာကတော့ Challenger Brand တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
John Scully လက်ထက်မှာ Pepsi Generation Campaign ဆိုပြီး Coca Cola ကို အကြီးအကျယ် Challenge လုပ်ခဲ့တယ်။
Email အစားသုံးပြုလာတဲ့ Workplace Communication Platform “Slack” ဟာ challenger brand ပါ။ Snapchat, Tesla ဟာ challenger brand ပါ။ Uber ကို direct challenge လုပ်တဲ့ Lyft ဟာ Challenger Brand ပါ။ users တွေလုပ်တဲ့ #DeleteUber campaign အပြီးမှာ market share အကြီးအကျယ်တက်လာတယ်။
အများစုထင်နေကြတဲ့ Challenger Brand ဆိုတာ ………..
အများစုဟာ Market Leader ထက် စျေးကွက်ဝေစုနည်းတဲ့ တစ်နည်းအားဖြင်. textbook တွေမှာ ရေးထားတဲ့ market follower နဲ့ အမှတ်မှားကြပါတယ်။ အမှန်တော့ Challenger Brand တစ်ခုကို Adam Morgan ကတော့ criteria သုံးချက်နဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
1. State of the Market – စျေးကွက်ဝေစုအကြီးဆုံးရထားတဲ့ market leader မဟုုတ်သလို Nicher လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
2. State of Mind – အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Challenger ဆိုတာ စိတ်အခြေအနေနဲ့ ထားတဲ့စိတ်သဘောထားပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာလာ David and Goliath ပုံပြင်အရဆိုရင် David လိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ Brand မျိုးပါ။ ရန်သူ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ရင်ဆိုုင်မယ်ဆိုတဲ့ attitude မျိုးနဲ့ပါ။ Apple ရဲ. 1984 Super Bowl Commercial မှာ Apple ရဲ. state of mind ဟာ Challenger State of Mind ပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်ထက်ကြီးနေပြီး ဒါကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးပါ။ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်တဲစိတ်ဓာတ်မျိုးပါ။
3. Rate of Success – အောင်မြင်မှုနှုန်းမြန်တာပါ။ တချိန်မှာ နှေးသွားတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Market Leader ကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဘယ်လို growth hacking လုုပ်လို့ရတယ်ဆိုုတာ ပြသွားတဲ့ brand မျိုးပါ။ ဥပမာ Jet (Amazon နဲ့အပြိုင်ငွေကြေးချွေတာပေးတဲ့ site)
Challenger Brand ကို သတ်မှတ်တဲ့၊ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ကြတဲ့အချက် အများကြီးရှိပေမယ့် ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအချက် ၂ ချက်ကတော့
1. Lighthouse Identity – ဒီမှာတော့ Image ကို ပြောတာမဟုတ်ဘဲ Identity ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Identity ဆိုတာကတော့ ဥပမာ မြန်မာလိုပြောလိုက်ရင် ရှိတဲ့ အရည်အသွေးတွေဖြစ်ပြီး Image ကတော့ သူများကိုယ့်ကို မြင်တဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ “Diesel” – Jeans Company မှာ ကိုယ်ရဲ.ဘဝနေထိုုင်မှုအတွေးအခေါ်ရှိပါတယ်။ Facebook ဟာ move fast and break things ဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူ Movement တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။ ဥပမာ Apple မှာ Help Desk ဆိုတဲ့စကားလုံးအစား Genius Bar လိုမျိုး စကားလုံးသုံးတာ။ Identity တည်ဆောက်ထားတာတွေဟာ Challenger Brand တွေရဲ့ Identity ပါ။ နောက်ပြီး Snapchat မှာ Camera Company ဆိုတဲ့ Identity နဲ့ challenger brand တစ်ခုပါ။
2. Thought Leadership – Follower တွေလို copy လုပ်တာထက် Idea Center ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Samsung ဟာ Follower ကနေ Challenger Status ကိုတက်လာတာ Samsung S8 ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တွေ.နိုင်ပါတယ်။ Knox လိုမျိုး feature အပြင် DeX Station အသုံးပြုပြီး Computer နဲ့တွဲလာနိုင်တာတွေ။ ဥပမာအားဖြင်. Smartphone တစ်လုံး သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ definition ကို အသစ်ပြန် define လုပ်တာမျိုး။ ဥပမာ Xiaomi MIUI မှာ Redefining Android ဆိုတဲ. slogan နဲ့ လာတာမျိုးဟာ Challenger Brand တစ်ခုမှာ ရှိတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
(P.S. – Market Leader ဟာလည်း Challenger State of Mind ရှိရင် Challenger Brand ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
အောင်မြင်သော challenger brand များကိုမွေးထုတ်နိုင်သောစွန့်ဦးတီထွင်များဖြစ်ကြပါစေလို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်း brand များစတင်ရာ မန္တလေးမှ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Ref: Eating the big fish